I-Red Square yaseMoscow ivaliwe emva kokuwa kodonga lwaseKremlin
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » I-Red Square yaseMoscow ivaliwe emva kokuwa kodonga lwaseKremlin
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
IMoscow Red Square ivaliwe emva kokuwa kodonga lwaseKremlin.
Imimoya yempepho ebetha ngamandla yahlasela iMoscow, yabangela isiphithiphithi ezitratweni kwaye yade yaqhekeza isikipa, eyonakalisa udonga lwaseKremlin.
Umongameli wase-Russia uVladimir Putin ebekhe wagxeka imeko yemozulu engaqhelekanga, njengemililo yasendle enkulu kunye nezikhukula ezitshabalalisayo, kubushushu behlabathi.
Kwingxelo ebhalwe kwiziko likamasipala laseMoscow, amagosa alumkise abahlali ukuba bazikhathalele, besithi imimoya ingafikelela kwiimayile ezingama-20 ngeyure.
Elinye lamacandelo kudonga lwaseKremlin alulahlekanga kwaphela emva komoya.
Umoya ovuthuzayo, imvula kunye nesichotho sichaphazele ikomkhulu laseRussia iMoscow namhlanje.
Imimoya enamandla yomoya ibangele ukubulawa kwabantu ngokubanzi, ukuwisa imithi, ukuthumela imigqomo yenkunkuma ephaphazelayo esitratweni kwaye yonakalise nodonga lwe eMoscowInqaba yodumo yaseKremlin.
eMoscow Amagosa esixeko athumele ingxelo kwiziko leendaba likamasipala, elumkisa abahlali ukuba balumke, ngenxa yomoya onokuthi ufike kumawaka angama-20 ngeyure.
"Nceda uhlale ngaphakathi ezindlini xa kunokwenzeka imozulu imbi," ingxelo yaseburhulumenteni ifundile, "ulumke kakhulu esitalatweni, thintela ukuzimela ecaleni kwemithi kwaye ungapaki iimoto ecaleni kwazo."
Zonke iindinyana eziya ku- eMoscowIndawo ebomvu yeRed Square ivaliwe kwizitalato ezikufutshane emva kokuba isikhunta siwile kancinci Kremlin udonga kwangoko namhlanje.
Ngokweenkonzo zonxunguphalo, ukungqinisisa abasebenzi kwi Kremlin Udonga lwawa, lwaza konakala enye yeendonga zodonga.
Kwangoko, iOfisi Yemicimbi Yoluntu Yokhuseleko yaseRussia ibhengeze ukuba esi sehlo senzeke ngenxa yomoya onamandla, akukho monakalo uxeliweyo.
Ngokuka-Putin, inani elandayo leziganeko zemozulu "ukuba akunjalo ngokupheleleyo, ubuncinci ubukhulu becala, ngenxa yotshintsho lwemozulu kwilizwe lethu."